Posted by PhyoPhyo at Thursday, January 23, 2014 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
၂၀ ရာစုမြေခွေးရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားပန်းခြံထဲမှာ
ဒစ္စနေ နဲ့ ယူနီဗာဆယ်လ်တို့ဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ ရုပ်ရှင်တွေထဲက မြင်ကွင်းတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းခြံရဲ့ရှေ့မှာယဉ်ပြိုင်မှုတွေပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ 20th Century Fox ဟာ ရင်ဖိုစရာစီနင်းလိုက်ပါနိုင်မယ့်ပါတီမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ “20th Century Fox World” လို့ အမည်ပေးထားပြီး အဲဒီ ပန်းခြံထူးခြားဆန်းပြား အပြင်အဆင်တွေကို ၂၀၁၆ မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ Resorts World Genting အပမ်းဖြေပန်းခြံရဲ့ အခွဲအဖြစ် မြို့တော်ကွာလာလမ်ပူအပြင်ဘက် တစ်နာရီခန့်သွားရတဲ့နေရာမှာပါ။ အစီအစဉ်အတိုင်းဆိုရင် ၂၅ ဧက ကျယ်ဝန်းမယ့်ပန်းခြံထဲမှာ Fox ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ “Ice Age”, “Rio”, “Alien vs. Predator”, “Planet of the Apes” နဲ့ “Night at the Museum” ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပဲ စိတ်ဝင်စားစရာ အပျော်စီးနင်းလိုက်ပါနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း၊ ချားရဟတ်မျိုးတွေနဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားအောင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကစားနည်းတွေမှာ ကလေးငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တခြားဆော့ကစားစီးနင်းလိုက်ပါနိုင်မယ့်ယဉ်လမ်းကြောင်းတွေက ရင်ဖိုထိတ်လန့်စရာရှာဖွေနေကြသူတွေအတွက်ပါ။ ဘယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းအခင်းအကျင်းက လူကြီးတွေအတွက်ဖြစ်နေမလဲ အသေအချာကြိုတင်မပြောနိုင်ပေမဲ့ “Alien vs. Predator” လမ်းကြောင်းကတော့ ၃ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေအတွက်မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ “ပထမဆုံး ၂၀ရာစုမြေခွေးအခင်းအကျင်းနဲ့ပန်းခြံကို Resorts World Genting မှာဖွင့်လှစ်လိုက်တာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဇာတ်ကောင်သမိုင်းတွေကို နေရာအသစ်တစ်ခုမှာပြသနိုင်တော့မှာဖြစ်သလို၊ ထူးခြားတဲ့ဖျော်ဖြေမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ် စီစဉ်ထောက်ပံ့ပေးမှာပါ” လို့ 20th Century Fox သုံးစွဲသူထုတ်ကုန်ဌာန ဥက္ကဌ ဂျက်ဖရီဂေါ့ဒ်ဆစ်ခ်က ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူတွေ မလေးရှားမှာစုစည်းကြပြီး မှော်မျက်လှည့်ဆန်ဆန် Fox ရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားအပြင်အဆင်တွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြတော့မှာပါ။ Genting မလေးရှား CEO တန်ရှရီကော့ခ်သေး က 20th Century Fox World အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံက ခရီးသားဧည့်သည်တွေအများစုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပထမဆုံးအဲဒီအခင်းအကျင်းပန်းခြံကို မလေးရှားမှာတည်ဆောက်ဖို့ 20th Century Fox က ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟာ ယူအက်စ် Fox ရုပ်ရှင်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ စိတ်ပျက်စရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်သွားကြမှာပါ။ မလေးရှားဟာ ခရီးသွားဈေးကွက်ကြီးကျယ်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် Fox ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ဈေးကွက်ကြီးမားဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ Fox က ဆိုတယ်။ အာရှရဲ့ ပထမဆုံး Legoland ကို မလေးရှားမှာပဲ ၂၀၁၂ က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတယ်။ စင်္ကာပူကနေ အချိန်တိုအတွင်းအရောက်သွားနိုင်တဲ့နေရာမှာပါ။ ဒေါ်လာ ၂၄၃ သန်း အကုန်အကျခံခဲ့ပြီး စတုရန်းမီတာ ၃၀ ရှိတဲ့ ပန်းခြံပါ။ ကလေးငယ်စီးနင်းလိုက်ပါဆော့ကစားနိုင်တဲ့ကစားနည်းပေါင်း ၄၀ ရှိပြီး ပြပွဲတွေနဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာမှာ Legoland Waterpark ကိုလည်း ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ Legoland အပမ်းဖြေဟိုတယ်ဟာ ဖွင့်လှစ်ဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်ပြီးစီးနေပါပြီ။ ၂၀၁၄ မှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ တောင်ဘက်နယ်နမိတ် စင်္ကာပူမှာလည်း ယူနီဗာဆယ်စတူဒီယိုကို ၂၀၁၀ မှာ Resorts World Sentosa တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း Cartoon Network Amazone water park ကို ပတ္တရား အပမ်းဖြေမြို့တော်အနီး ၂၀၁၄ မှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Amazon Falls Co. Ltd ရဲ့ စီမံကိန်းပါ။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, January 19, 2014 Labels: ချစ်သမျှကို
ဟိုဒီ သတင်းတွေဖတ်ရင်းနဲ့ Pooh နဲ့ Piglet တို့ ပြောတဲ့စကားလေးတွေချစ်စရာကောင်းလို့
ဒီနေ့က Winnie-the-Pooh ဖန်တီးရေးသားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး A. A. Milne မွးဖွားခဲ့တဲ့နေ့တဲ့။
အဲဒါနဲ့ စာသားလေးတွေ မေ့သွားမှာစိုးတာနဲ့။
“'We'll be Friends Forever, won't we, Pooh?' asked Piglet.
“I think we dream so we don't have to be apart for so long. If we're in each other's dreams, we can be together all the time.”
“'How do you spell love?' - Piglet
'You don't spell it...you feel it.' - Pooh”
Posted by PhyoPhyo at Friday, January 03, 2014 Labels: living fashion, စုမီအောင်ရဲ့စာ, ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို
အထပ်ပေါင်း ၃၁ ထပ်ရှိသည့် Future ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုအတွင်း၌ လှည့်လည်ကြည့်ရှုသူ၊ ဈေးဝယ်လာသူ အများအပြား ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်လျက်ရှိသည်။ အသွေးအရောင်စုံ လူအပေါင်းတို့သည် ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိ အထပ်များတွင် ခြေချင်းလိမ် အောင် ပြည့်နှက်နေသည်။ စက်လှေကားများပေါ်တွင် ခြေထောက်ပေါင်းများစွာ တလိမ့်လိမ့် ဆင်း/တက် ပြုနေကြသည်။ ဓာတ်လှေကား များသည်လည်း မရပ်မနား ၃၁ ထပ်လုံး တက်လိုက် ဆင်းလိုက် ရပ်လိုက် နှင့်၊ အထပ်တစ်ထပ် တွင် ရပ်နားလေတိုင်း လူများ တွန်းတိုက် ရှောင်တိမ်းလျက် ၀င် ထွက် သွားလာနေကြသည်။ အထပ်တိုင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းအသစ်အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲ၊ တေး အယ်လ်ဘမ်သစ် မိတ်ဆက် လက်မှတ်ထိုးရောင်းချပွဲ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုက နေ့စဉ်လိုလို ရှိနေတတ်သည်။ R&Bအဆိုတော်မလေးတစ်ဦး၏ တေးအယ်လ် ဘမ်သစ်လက်မှတ်ထိုးရောင်းချပွဲ အခင်းအကျင်းရှေ့၊ လူအုပ်ကြီးကြားထဲ ရပ်လျက် သူတို့နှစ်ယောက် စကားအချီအတင် ပြောဆိုနေကြ သည်။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, January 02, 2014 Labels: မေမေ့ရဲ့ အကြောင်းကြားစာ
မေမေက ဒီအကြောင်းကြားစာလေး ဘလောဂ့်မှာ တင်ချင်တယ်ဆိုလာလို့ပါ။
ဖေဖေ မေမေ ခပ်ငယ်ငယ်ကဓာတ်ပုံလေးတွေပဲ တင်ထားလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ မိတ်ဆွေအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ပျဉ်းးမနားမြို့နေ ခင်ပွန်း အငြိမ်းစား Leprosy Inspector ဦးအောင်သန်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဘ၀တစ်ပါး ပြောင်းသွားပါသဖြင့် ဘုရားအမှူးပြု သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ရက်လည်ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်းစသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစုစုတို့ကို သိုက်မြိုက်စွာ ပြုပြီးဖြစ်ပါကြောင်း Florist က သိသော မသိသော၊ Florist ကို သိသော မသိသော စာပေလောကမှ မိတ်ဆွေများအား ချစ်ခင်လေးစားစွာ အကြောင်းကြားပါသည်။